ရွှေဘုန်း(စေတနာပန်းခင်း): ပဟေဠိဆန်သော ထိုတစ်နေ့
“တာမွေဗလီ ပါလား …တာမွေဗလီ ဆင်းမယ့် အကိုအမများ တိုးထားပေးကြပါ”
ကားစပါယ်ယာ၏ အော်သံကြောင့်လန့်နိုးသွားရပါတယ်။ အာရုံကိုမနည်းစုစည်းပြီး ဆင်းရမယ့် မှတ်တိုင်ကို စဉ်းစားလိုက်သည်။ သီတာမှတ်တိုင် ဆိုတော့ နှစ်မှတ်တိုင်လိုပါသေးလား။ လှိုင်သာယာမှာ အလုပ်ဆင်းပြီး အဝေးသင်ဖြေဆိုရန် ကျူရှင်ကိုတော့ သီတာလမ်းက ဆရာမတစ်ယောက်ဆီမှာ တက်နေတဲ့ ကျွန်မ အတွက် ရွှေဧည့်သည် ကားပေါ်မှ အချိန်များဟာ များသောအားဖြင့် အိပ်စက်အနား ယူချိန်များသာ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ နေ့လည် ၁၂ နာရီခန့်က နေ့လည်စာစားသည့်အတွက် ညနေ ၆နာရီကျော် တွင်တော့ ကျွန်မ၏ အစာအိမ်က တစုံတရာကိုတောင်းဆိုနေချေပြီ။ ဆရာမအိမ်မရောက်ခင် လမ်းထောင့်လေးက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ကော်ဖီတခွက်လောက်ဝင်သောက်ရန် စဉ်းစားရတော့မည်။ ည ၉နာရီအထိ စာသင်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း လကုန်ရက်နီးနေသဖြင့် ကော်ဖီမစ်ကိုသာရွေးချယ်စရာ။ ပြီးတော့ ကျွန်မကတစ်နေ့လုံးစာ ဘတ်စ်ကားခ၊ နေ့လည်စာဖိုး နှင့် ငွေအကြွေ အချို့သာ တိုင်းတာထည့်ယူလာ တတ်သည်လေ။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှနာရီက ၆း၂၀ တိတိညွှန်ပြနေသည်။ မှာထားသော ကော်ဖီမစ်ထုပ် ကလေးကို ဖောက်နေစဉ်မှာ
နားထဲကို မ၀ံ့မရဲလေးတိုးဝင်လာသော အသံနှစ်ခုရှိရာ စောင်းငဲ့ကြည့်မိတော့ ၇-၈ နှစ် နှင့် ၃ နှစ် အရွယ်ခန့် ကလေး နှစ်ဦး။ ညစ်ပတ်ပေရေနေသော အ၀တ်အစား၊ ပိန်လှီခြောက်ကပ်လှသော ခန္ဓာကိုယ်များ၊ မွတ်သိပ်တောင့်တစွာ သို့သော် မမျှော်လင့်ရဲသော မျက်ဝန်းမှိန်မှိန်လေးများ။ ကျွန်မ လက်ထဲမှ ကော်ဖီကို ဆက်မဖျော်မိဘဲ စူးစမ်းစွာလိုက်ကြည့်နေမိသည်။ ဆိုင်ရှင်က ဘာမှမပြောသလို စားပွဲထိုးလေးများကလည်း လျစ်လျူရှုထားသဖြင့် ကလေးနှစ်ယောက် စားပွဲဝိုင်းစေ့ လျှောက်ရပ်နေကြ သည်။ တချို့ဝိုင်း ကတော့ခေါင်းခါပြသည်။ တချို့ဝိုင်းကလက်ခါပြသည်။ တချို့ကငွေအကြွေအချို့ထုတ်ပေး ကြသည်။
ကျွန်မထိုင်နေသောစားပွဲသို့ရောက်လာပါပြီ။ ခုနက ငေးကြည့်နေမိသော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသံတိတ်အပြစ်တင်လိုက်ပြီး ငါဘာလုပ်ရမလဲ မေးခွန်းကို ရင်ထဲမှာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် မေး ရင်း ကြောင်ကြည့်နေမိသည်။ အိတ်ထဲမှ ပိုက်ဆံကိုအပြေးအလွှားစဉ်းစားနေမိသည်။ စားပွဲပေါ်မှကော်ဖီမစ်ဖိုး ရှင်းပြီှးလျှင် အိမ်ပြန်ဖို့ ဘတ်စ်ကားခနှင့် ပိုငွေအနည်းငယ်သာ ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်
ခေါင်းလေးတွေ ပြိုင်တူငြိမ့်လာကြတော့ ကျွန်မဘာမှမစဉ်းစားတော့ပါ။
“သားတို့ထိုင်..မုန့်စားမလား ပေါင်မုန့်တစ်ထုပ်စီစားလို့ရတယ် .. မ၀သေးရင်တော့ ဒီကော်ဖီကို နှစ်ယောက်သောက်”
ကျွန်မမှာ အကျင့်တစ်ခုရှိသည် ကလေးများတောင်းစားနေလျှင် ဘယ်သော အခါမှ ငွေကြေး ပေးကမ်းေ လ့မရှိပါ။ မုန့်တခုခုသာ ပေးလေ့ရှိပြီး (အချိန်ရလျှင်) သူတို့နှင့် စကားပြောလေ့ ရှိပါသည်။
ကလေးများအားပေါင်မုန့်တစ်ထုပ်စီ ဖောက်ပေးလိုက်ပြီး ဂရုဏာသက်စွာ ကြည့်နေမိသည်။
“သြော်…တကယ်ဆာနေကြရှာတာကိုး” …သူတို့အားပါးတရစားနေကြပြီ။ ရေနွေးခွက် ၃ ခွက်ကို ဖြည့်ရင်း ကိုယ့်အစာအိမ်ကိုယ်မေ့သွားတော့သည်။ သူတို့လေးတွေ ပေါင်မုန့်ကုန်တော့ ရေနွေးခွက်က လက်လှမ်းကြတာမို့ ကော်ဖီသောက်လေဟုသာ တိုးတိုးညင်သာပြောမိလိုက်သည်။
“ညီမလေးပါ…. စုစု လို့်ခေါ်တယ်”
ညီမလေးဆိုတော့ ရင်ထဲမှာ ထိတ်ကနဲဖြစ်သွားရသည်။ ဒီအရွယ်ကတည်းက တောင်းစားနေရ သောမောင်နှမလေးနှစ်ယောက်ကို ကရုဏာသက်မိသလို မိန်းကလေးဖြစ်သူ အငယ်လေးအတွက် ရင်လေး သွားရပြန်သည်။ ကျွန်မမှာလဲ ညီမလေးတွေ တူမလေးတွေ ရှိနေသည်လေ။
“မေမေတို့ဖေဖေတို့ရော” မေးလိုက်တော့ ကလေးမျက်နှာပျက်တာတစ်ချက် မြင်လိုက်ရသည်။ ဘာလို့များပါလိမ့်????
“အဖေက အရင်ကရထားပေါ်မှာ မုန့်ရောင်းတယ် ..ခုတော့သေပြီ.. မေမေက အ၀တ်လိုက် လျှော်တယ်”
ဆက်မမေးရဲတော့ပါ။ သူတို့လေး၏နှလုံးသားနုနုလေးတွေထဲ နာကျင်မှုတွေတိုးပွါးလာမှာ လုံးဝမှ မလိုလားပါ။ မေးချင်နေတာတွေက အများကြီးပါ။ ကလေးတွေလဲ ထသွားချင်နေပုံပေါက်နေပြီ။ သူတို့လဲ စိတ်ရှုပ်ရှာမည်ပေါ့။ မုန့်လေးတစ်ခုကျွေးပြီး မေးခွန်းတွေအများကြီးနဲ့ နှိပ်စက်သလိုဖြစ်မှာ စိုးရိမ်မိပါသည်။
“ပြန်တော့မလားကလေး” ဟုမေးတော့ ခေါင်းသာငြိမ့်ပြသည်။
ကျွန်မလဲ သွားရပါတော့မည်။ ပေါင်မုန့်နှစ်ခုနှင့် ကော်ဖီတခွက်ကျသင့်ငွေသည် ကျွန်မ ည၉နာရီ မှ ကြားကားစီးပြီးပြန်ရန် မလုံလောက်တော့ပြီဖြစ်သဖြင့် ဆရာမကို ဖုန်းဆက်ကာခွင့်တိုင်ပြီး သာမန် လိုင်းကား တွေရှိချိန်မှာသာ စောစောပြန်ဖို့စဉ်းစားမိလိုက်သည်။ ဆရာမအိမ်ထိရောက်သွားပြီး ဒီနေ့မသင်တော့ဘူး ပြောလို့မှ မဖြစ်လေပဲ။ ရုံးမှပြန်မလာရသေးကြောင်း မုသာတစ်ခုတော့ကျူးလွန်ရပါတော့မည်။ ကိစ္စမရှိပါ။ ကျွန်မလုပ်ခဲ့သောလုပ်ရပ် မှားသည်ဟု ကျွန်မ မသတ်မှတ်ပါ။
ကျွန်မခဏလေး ကြောင်သွားသည်။ ခုမှရှင်းမှာလေ ၀ိုင်းမှားတာလားဟု ထပ်ပြောတော့ ရှင်းပြီး သွားပြီအစ်မ လို့သာ ပြန်ပြောပြန်သည်။ တစ်ခုခုတော့ထူးခြားနေပါပြီ။ ကျွန်မ ကောင်တာဆီလျှောက် သွားပြီး ဆိုင်ရှင်ကို တစုံတခုမေးမည်ပြင်တော့ ဆိုင်ရှင်ကပင် ကြိုတင်၍ “ရှင်းပြီးပြီညီမ” ဟုထပ်ပြောပြန် သည်။
“ဟုတ်ကဲ့ ဘယ်သူရှင်းသွားလဲ သိချင်လို့ပါ ကျွန်မ ကျေးဇူးတင်ချင်လို့ပါရှင်.. ပြီးတော့ ကလေး တွေလဲ ခုမှစားပြီးတာဆိုတော့ ပိုက်ဆံဘယ်လိုတွက်ပေးလိုက်လဲလို့ပါ.. လိုရင်ကျွန်မထပ်ပေးပါ့မယ်”
“ရတယ်ညီမ… နောက်မှလိုတာပိုတာရှင်းမယ်လို့ ပြောထားတယ်..ရတယ် စိတ်မပူနဲ့.. သူတော့ပြန်သွားပြီ”
“ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မ.. ငွေရှင်းသွားတဲ့သူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပေး ပါနော်”
ဒါဖြင့် ကျွန်မကျူရှင်အေးဆေးတက်လို့ရပြီပေါ့။ ဆရာမအိမ်ဘက်လျှောက်ထွက်လာရင်း ခေါင်းထဲမှာ မတင်မကျကျန်ရစ်နေသည်။ အဲဒီညနေက ဆရာမသင်သမျှစာ ကျွန်မခေါင်းထဲ မ၀င်တော့ပါ။ “ပြန်သွားပြီ” တိုးတိုးလေးရေရွတ်ရင်း တခုခုသတိရလိုက်ပါသည်။ ဒါဆိုသူ ခုနကတည်းကရှိနေခဲ့တယ်ပေါ့။ ဘာကြောင့်ရှင်း သွားရတာလဲ? နောက်မှလိုတာပိုတာ ရှင်းမယ်ဆိုတော့ ပိုင်ရှင်နှင့် ရင်းနှီးသူသာဖြစ်ရမည်။ ဒီလက်ဘက် ရည်ဆိုင်မှာ အမြဲထိုင်လေ့ ရှိသူဟု ပြောရင်ရကောင်းပါရဲ့။ ဒီလူမှာ ကလေးတွေကို ကျွေးမွေးချင်တဲ့ စိတ်စေတနာ ရှိတာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ သူကိုယ်တိုင်ဆိုင်ထဲမှာ ရှိနေရက်နဲ့ ကလေးတွေ ကိုဘာလို့ ကိုယ်တိုင်ခေါ်မကျွေး လိုက်တာလဲ?? သူက ခေါင်းခါပြသောဝိုင်းကလား?? လက်ခါပြသော ၀ိုင်းကလား?? ငွေအကြွေအချို့ ထုတ်ပေးသူတစ်ယောက်လား?? ဆိုင်ရှင်ကိုအားနာလို့လား?? ဒါမှမဟုတ် တူတူထိုင်ရမှာ ရှက်လို့လား?? ဒါမှမဟုတ် အဲလိုကျွေးလိုက်ဖို့ စိတ်မကူးမိလို့များလား??? ကျေးဇူးတင် စရာကောင်းပါသည်။ အိမ်ပြန်လမ်းကြားကားပေါ်မှာ အဲဒီမေးခွန်းတွေကို ကျွန်မလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတော့သည်။
“မြင်နိုင်ကြပါစေ မြင်ရဲကြပါစေ မြင်တတ်ကြပါစေ” လို့……
အလင်းသစ် April 1, 2011 at 1:25 AM
ပေါ်ပေါက်လာနေတဲ့အဖြစ်ပါ။။။ ကလေးငယ်တွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို
ငွေပေးရင်တော့ သူတို့ကို ဒီအလုပ်မျိုးနဲ့ သက်ဆိုးရှည်အောင်အားပေး
သလိုဖြစ်မစိုးလို့ မပေးဖြစ်ပါဘူး။။။ ပို့စ်လေးအရမ်းကောင်းပါတယ်။။
မြစ်ကျိုးအင်း April 1, 2011 at 7:19 AM
တောင်းရမ်းတဲ့ကလေးတွေကို အစားအစာ ကျွေးတာ ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
လမ်းပေါ်မှာ ရှိနေရမယ့် အရွယ်မဟုတ်လို့ ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက် တွေးတောစရာ ဖြစ်ရတာ ကြာပါပြီ။
နိင်ငံချမ်းသာလာတဲ့ တနေ့တော့ ဒါတွေ ပပျောက်မယ်ထင်ပါရဲ့
Unknown April 4, 2011 at 1:32 AM
မျိုးဆက်သစ်လေးတွေ အတွက် အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ မသိချင်ယောင်မဆောင်သင့်ပါဘူး။ လျို့ဝှက်တဲ့သူတစ်ယောက် ကတော့သူ အသိနောက်ကျသွားလို့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အောင်မြင်ပါစေ။